Madax Waynaha FIFA Ee Gianni Infantino Oo Hadal Digniin Iyo Qoshaha Uu Kubbada Cagta Ka Damacsan Yahay Ah Banaanka Keenay. - Gool24.Net
Madax Waynaha FIFA Ee Gianni Infantino Oo Hadal Digniin Iyo Qoshaha Uu Kubbada Cagta Ka Damacsan Yahay Ah Banaanka Keenay.
Madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta aduunka FIFA ee Gianni Infantino ayaa qirtay in qalalaasaha caabuqa coronavirus uu sabab u noqon karo in isbadal wayn lagu sameeyo qaabkii ay ahaayeen ciyaaraha kubbada cagta caalamku.
Gianni Infantino ayaa muujiyay in mustaqbalka loo baahan karo in laga badalo ciyaaraha caalamka qaabka ay hadda yihiin taas oo keeni karta tartamo yar, kulamo yar iyo xataa kooxaha oo ka yar inta ay hadda yihiin.
Gianni Infantino ayaa meesha ka saaray riyadii kooxaha Yurub ee aas aasitaanka horyaal cusub ee loo bixiyay Super league kaas oo uu tilmaamay mid aan la samayn doonin balse uu xataa meesha ka saari doono horyaalo hadda aan si sharci ah loo samayn.
Madax waynaha FIFA ee Gianni Infantino ayaa muujiyay in loo baahan karo in la soo koobo tirada tartamada kubbada cagta, kooxaha iyo waliba kulamada la ciyaaro wuxuuna sheegay in kubbada cagtu ay isbadal wayn oo waqti dheer ah u baahan karto.
Kubbada cagta iyo ciyaaraha kala duwan ayaa loo joojiyay saamaynta cudurka coronavirus iyada oo ilaa hadda aan si rasmi ah loo ogayn waqtiga ay dib u bilaaban karaan.
Gianni Infantino ayaa dhinaca kale u muuqday mid digniin u diraya cid kasta oo abaabusha tartamo aan waafaqsanayn qaab dhismeedka FIFA iyada oo ay haddaba jiraan tartamo saaxiibtinimo oo uu ka mid yahay UEFA Nations League iyo waliba koobka ICC.
Gianni Infantino oo saamaynta dhaqaale ee uu coronavirus ku yeelan karo kubbada cagta aduunka ayaa yidhi: “Waxaa loo baahan yahay qiimaynta samaynta dhaqaale ee aduunka. Hadda waa wax adag, ma garanayno waqtiga ay caadi ku soo noqon doonto”.
Gianni Infantino oo qorshaha uu damacsan yahay sharaxaya ayaa yidhi: “Laakiin waxaanu eegaynaa fursadaha, waxaa laga yabaa in aanu dib u habayn ku samayno kubbada cagta anaga oo talaabo gadaal u qaadayna oo qaabab kala duwan ah. Tartamo yar, laakiin xiiso badan. Laga yaabee kooxo yar, laakiin in badan miisaaman. Kulamo yar, si loo ilaaliyo caafimaadka ciyaartoyda, laakiin aad tartan u ah”.
Madax wayne Gianni Infantino ayaa hoos u dhigay riyada kooxaha waa wayn ee Yurub ee Super League wuxuuna yidhi: “Waxa aan arkay, kuwo kale oo haddaba agaasimaya tartamo aduunka oo dhan oo kabaxsan qaabka hay’adeed iyaga oo aan ixtiraamayn horyaalada maxaliga ah, qaaradaha iyo kubbada cagta aduunka” ayuu Infantino hadalkiisa raaciyay.
Gianni Infantino oo qorshihiisa mustaqbalka xog ka bixinaya ayaa yidhi: “Mustaqbalka waxaa waajib ah in aynu helno ugu yaraan 50 kooxo xul oo koobka aduunka ku guulaysan kara, ma aha kaliya siddeed Yurub ah iyo laba South America ah”.
“Waxaynu u baahanahay 50 kooxood oo koobka kooxaha aduunka ku guulaysan kara, ma aha kaliya shan ama lix Yurub ah oo ay 20 ka mid ahi Yurub yihiin, oo ka fiicnaan karta shanta ama lixda maanta, laakiin waqtigii ku haboonaa ma aha kani”. ayuu Gianni Infantino hadalkiisa raaciyay.